Raadi My Phone: fog ay ula socdaan ama masixi My Windows Phone
1 Transfer WinPhone
Nokia Xiriirada in ay Android
Nokia Data in Android
WinPhone Data in Android
WinPhone Xiriirada in ay Android
Nokia Xiriirada in Samsung
Nokia Xiriirada in LG
Nokia Xiriirada in Motorola
Nokia Data in Samsung
Nokia in Samsung qod6
Nokia Data in Sony
Nokia Xiriirada in HTC
Nokia Xiriirada in Nexus 5
Nokia Xiriirada in Moto X
Lumia Xiriirada inay iPhone
Nokia Data si iPhone
WinPhone si iPhone
WinPhone Data in macruufka
Nokia Data in Blackberry
WinPhone in Blackberry
Music Lugood in WinPhone
Nokia Data in Winphone
Data Android inay Nokia
iPhone Xiriirada in Nokia
Data Android inay WinPhone
WinPhone in WinPhone
Blackberry in WinPhone
iPhone Data in Winphone
Recovery File Nokia N97
Recovery File Nokia Lumia
3 WinPhone Talooyin
WinPhone 10 Hagaaji
WinPhone Rasuulka Apps
Apps Android on Winphone
10 WinPhones Best
5 WinPhones New
Raadi My Phone
Tababare Device WinPhone
Nidaameed WinPhone Xiriir
Kaabta Nokia Data
Lumia Video qaabab
Kaabta & Soo Celinta WinPhone
Spotify on WinPhone
VLC on WinPhone
WinPhone yeedhay Apps
Mobile OS Isbarbar
Marka laga haddii Windows Phone la xaday ama si fudud meel khaldan, aad meel fog u helida ama u masixi la feature Raadi My Phone. Waxaa suuragal ah keliya haddii telefoonka waxaa lagu gagadin oo ku xiran internetka. Laakiin ka sii muhiimsan, in aad u baahan doontaa inaad awood u habkaani waqti ka hor - doorbidayo marka aad shaqeysiin qalab mobile.
1. In loo sahlo Raadi My Phone on Your Windows Phone
2. Meel ku socdaan aad Windows Phone
3. masixi Your Windows Phone
4. Top 3 Socodka Apps for Windows Phone
Wondershare MobileTrans --Guji 1 Transfer Phone Windows
Awood-siinta Raadi My Phone on Your Windows Phone
Wax kasta oo kale ka hor, waxaad u baahan doontaa inaad awood u hel My function Phone ku saabsan telefoonka. Ma suuragelinayo in shaqada kordhin doono khatarta ah ma waxaad helo qalab aad.
1. Tag Settings> Hel My Phone> Save meel aan telefoonka ee muddeysan oo ku hor batteriga ku egyahay si ay u fududaato in la helo .
2. Tag account.microsoft.com/devices iyo saxiixa isticmaalka xisaabta isla Microsoft aad loo isticmaalo ee aad taleefan. Riix Phone Windows aad rabto in aad heshaan oo guji "Hel My Phone 'si aad u aragto haddii ay u shaqayso.
Meel ku socdaan aad Windows Phone
Xaaladaha meesha aad badiyay aad telefoon ama si fudud u meel khaldan, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u socdaan hoos u mar Raadi My Phone waxaa u suurta aad Windows Phone. Waxaad markaas samayn karaa lagama maarmaanka ah si ay u ilaaliyaan in la isticmaalo dadka kale ama ha wici inay u wargaliyaan dadka u dhow in ay jirto phone luntay.
1. Tag account.microsoft.com/devices iyo saxiixa isticmaalka xisaabta isla Microsoft aad loo isticmaalo ee aad taleefan. Riix Phone Windows aad rabto in aad heshaan oo guji "Hel My Phone 'si aad u aragto haddii ay u shaqayso.
2. map A pinpointing meesha aad Windows Phone muuqan doonaa. Yarey gudaha iyo dibedda si ay u leeyihiin wanaagsan ugu fiirso map-ka.
3. Ma mid ka mid ah kuwan soo socda:
a. Riix 'Refresh' si aad u aragto meesha ugu dambeeyay ee telefoonka;
b. Riix 'Ring si aad u samayso giraan telefoonka aad - xataa marka aad u lahaa inay gariiraan ama aamusan;
c. Guji "Lock 'in meel fog laga quful telefoonka iyo tuso fariin shaashadda qufulka. Waxaad u baahan doontaa in la dhiso sirta ah ee aad telefoonka, kaas oo loo baahan yahay si ay u furo.
Masixi Your Windows Phone
Xaaladaha ba'an ee meesha aad joogto qaarkood in aadan dib u heli doonaa telefoon, ama haddii ay jiraan macluumaad aad qarsoodi ah in aad u baahan tahay in la ilaaliyo ilaa aad dib ugu hesho Windows Phone, waxaad si fudud u tirtiri kartaa telefoonada aad fog.
2. Click 'masixi'.
3. Dooro checkbox oo guji 'masixi' 'waxaan diyaar u masixi aan telefoonka ahay'.
Fiiro gaar ah: Had iyo jeer la xiriir bixiyaha network si aad u sheegto in aad laga badiyay telefoonka. Haddii aad qabto kaararka deynta lala ku saabsan telefoonka, isla markiiba la xiriir bangigaaga.
Top 3 Socodka Apps for Windows Phone
The Raadi My Phone feature waa wanaagsan yahay sida ay tahay - ma ahan oo keliya ayey ha idin ugaarsadaan aad Windows Phone, wargelin ay goobta haddii dhow yahay oo la ilaaliyo macluumaadkaaga la qufulka iyo masixi awoodaha. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u baahan tahay in asagu dheeraad ah in aad awood u yeelan doonaan in la helo telefoonka aad laga badiyay, halkan waa Socodka Top 3 Apps for Windows Phone.
Tracker GPS by FollowMee
App Tani raad meesha aad Windows Phone 8. Marka lagu rakibay in qalab aad, u Qoraynaa doonaa meesha aad telefoonka ee asalka iyo badbaadin in server ah xaqiijisatay. Via website-ka FollowMee, waxaad awoodi doontaa inaad si aad u ogaato meesha uu ku tagged Windows Phone. Intaa waxaa dheer, in aad u isticmaali kartaa si aad carruurta ama shaqaalaha 'halka Daily Monitor - waxaa jira hab qarsoodi si ay u ma u baahan tahay in ay ka wel iyaga ku saabsan oo garanaya in aad iyaga raad iyo qiyaanadii app si looga fogaado kormeer lagu hayaa. Taariikhda goobta diiwaan waxaa lagala soo bixi karaa diiwaanka. Wixii ganacsi, waxaa jira option caymiska si aad u helida gaadiidka kala duwan oo raxan shirkadda.
Faa'iido : Easy kor u taagaysa, ad-xirmo awoodda, isticmaalka batari la'aan, si joogto ah ay maamulaan ka dib markii ay hawshooda (ma u baahan tahay si loo soo nooleeyo ka dib markii howleheedii telefoonka).
Qasaarooyinka : Ha leeyihiin 'Ring' ama 'Lock' feature, kaliya rikoor meel la heli karo ee WiFi.
Haddii aad ka walwalsan tahay oo aad ammaanka ama asturnaanta, app waxa loogu talagalay adiga. Your phone ogolaan doonaa app this si ay ula socdaan meesha aad telefoon lagu xilliyo ku xiran tahay soo dhaweynta GPS ah; app gasho doonaa in aad booska 30 daqiiqo kasta, iyadoo ku xiran signal GPS ah. Kasta oo xogta diiwaan gashan waxa lagu kaydiyaa degaanka ee aad taleefan, oo aan ku server dibadda. Haddii aad ka welwelsan tahay dabasocdaha raad aad maalin walba u dhaqaaqdo, waxa aad awoodi kartaa in ay masixi wax goobaha diiwaan app ka barta mid ka mid ah waqtiga. Iyadoo app uusan haysan xirnaanta wax kasta baraha bulshada, ayaa kugu xiri kara app in ay SkyDrive inay geliyaan wixii xog ah dabagal gacanta ama si toos ah u galay file KML ah.
Faa'iido : Isticmaal awood yar taas oo macnaheedu yahay nolol batari dheer, oo lacag la'aan ah ka advertising.
Qasaarooyinka : Ha leeyihiin timestamp, maya 'Ring' ama muuqaalada 'Lock', aan meel kasta waa lagu qortey doonaa, maxaa yeelay, app samayn keliya 30 daqiiqo kasta.
Life360 Qoyska Tusaha
Waxaad isticmaali kartaa app this si aad u hesho telefoonka ah 'diiwaan' lumay adigoo isticmaalaya website app ama adigoo isticmaalaya telefoonka qof kale oo qoyska ee. Waxaa gelineya inaad si ay ula socdaan kasta oo qoyska ka tirsan ee waqti dhab ah ku dhowaad sax ah iyada oo la isticmaalayo tiknoolajiyadda ah GPS-socod oo awood leh. Feature Tani waxay sidoo kale waxtar leh si aad u ogaato wax kasta oo dhuma ama Windows Phone. Iyadoo app this, uma baahnid in aad sii yaabban halkaas oo xubnaha qoyskaaga waa sida mar dambe ma aad u yaabsan "marka waxaa yimid Hooyo si ay ii soo qaado dugsiga?" Ama "leeyihiin Emmett tagay xafiiska xisbiga lama filaan ah?", Maxaa yeelay, aad awooddo arko qof kasta khariiradda. Intaa waxaa dheer, waxa kale oo aad qalabayn karto app in ay ku soo wargelin marka qof gaadho meel gaar ah.
Faa'iido : kara si ay ula socdaan ilaa shan telefoonada laga badiyay for free, diro xubnaha qoyska, ka eeg meesha ay joogaan iyo arko haddii ay jiraan dhibaato.
Qasaarooyinka : Waxaa jira cayayaanka qaarkood haddii dhufto ee OS kala duwan ayaa loo isticmaalaa dhexeeya xubnaha qoyska.
Ka Windows Phone Demi Data si iPhone
Kaabta iyo Soo Celinta Windows Phone
Bedelka Android Data in Windows Phone
Faylal ay kala soo wareegeen BlackBerry in WinPhone
Kabsado Photo ka Windows Phone
Isticmaal VLC on Windows Phone
All u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan Browser Microsoft Edge on Windows 10
Sida loo isticmaalo Windows DVD Kan sameeyey,
Windows XP Undelete: Sida loo Undelete Windows XP Files
Download Windows DVD G XP
Sida loo dayactir Khaladaadka Registry Windows Si fudud
> Resource > Windows > Hel My Phone: fog ay ula socdaan ama masixi My Windows Phone